Jereo izay ho hitanao any Wales, Royaume-Uni | Bezzia
Inona no ho hita any Wales, Royaume-Uni
Susana Garcia | 24/03/2021 10:00 | Lifestyle, Tsangatsangana
Wales dia ao amin'ny United Kingdom ary io dia iray amin'ireo faritra tsara indrindra hitanay. Ny dia mamakivaky ity faritra atsimo ity dia mahavariana, satria mahita zaridaina mahafinaritra sy vohitra mahafinaritra izahay. Fantatra amin'ny maha-tany misy trano mimanda maro azy izy io, satria faritra arovana be izy io, nefa koa misy tanàna kely sy mahasarika izay manala rivotra.
Tena mendrika izany Diniho ny dia any amin'ny faritra Wales, satria ho raiki-pitia amin'ity faritra ity isika. Iray amin'ireo firenena kely indrindra ao amin'ny Fanjakana Mitambatra nefa tsy misy na inona na inona hitsiriritra ny hafa. Ho hitantsika ny toerana sasany hitsidihana any Wales.
1 Cardiff, renivohitra
2 Swansea, tanànany faharoa
3 Conwy, tanàna mahafinaritra
4 Valan-javaboary Snowdonia
5 Llandudno, ankafizo ny fomba Victoria
Cardiff no renivohitr'i Wales ary noho izany tsy maintsy jerena. Misongadina amin'izany ny tranony nanomboka tamin'ny andron'ny fanjakana romana na dia nanao fanavaozana maro aza izy ary ny fanitarana mandritra ny tantara. Tsy hadino koa ny Clock Tower sy ny Animal Wall. Avy eo isika dia afaka mitsidika ny manodidina an'i Castillo, izay faritra be varotra sy velona indrindra ao aminy. Mendrika ihany koa ny mahita ny Bute Park tsara tarehy, iray amin'ireo valan-javaboary lehibe indrindra any Angletera, miorina manamorona ny Renirano Taff. Tsidiho ireo galeria taloha tsara tarehy The Royal Arcade, toerana iray hahitana fahatsiarovana sy fahagola. Mitohy amin'ny fitsidihana ny tsena afovoany izany hijerena ireo vokatra mahazatra sy ny History Museum.
Swansea, tanànany faharoa
Io no tanàna faharoa lehibe indrindra sy lehibe indrindra ao Wales, ary toerana iray hitsidihana azy io. Ny ivony dia naorina taorian'ny Ady lehibe faharoa tamin'ny baomba. Afaka mahita ny Castle Square ianao ary mitsidika ny Oxford Street, ny faritra varotra ao aminy. Manasongadina ny tsena lehibe misy azy ihany koa, miaraka amin'ireo vokatra gastronomika tsara indrindra any Wales. Amin'ity toerana ity dia mila mijery ny bay tsara tarehy ianao ary mandalo ny Lighthouse Mumbles, ny jirony malaza.
Conwy, tanàna mahafinaritra
Any Wales dia manana tanàna kely mahafinaritra isika, toa an'i Conwy any North Wales. Tanàna misy mànda izay nantsoina ho World Heritage Site. Misongadina amin'ny trano mimanda taonjato faha-XNUMX izy tsy isalasalana fa hisarika ny saintsika izany ary mbola hitahiry ny ampahan'ny rindriny. Ao amin'ny villa ianao dia afaka mahita ny trano Plas Mawr miaraka amina maritrano Elisabethan tsara tarehy. Azontsika atao ihany koa ny mitsidika ny trano tsara tarehy kely indrindra any Great Britain sy ny faritry ny seranan-tsambo, izay tena tsara tarehy.
Ity valan-javaboary tsara tarehy miorina ao amin'ny Northwest Wales dia feno tendrombohitra, lohasaha, farihy ary riandrano. Toerana tsy ampoizina fotsiny raha mandalo azy isika, fa paradisa ho an'ireo izay te-hitsangatsangana eo afovoan'ny natiora. Ao amin'ity valan-javaboary ity dia ny Mount Snowdon, ny tampony avo indrindra any Angletera, ary koa ireo tampon-tendrombohitra ambany hafa izay mety indrindra ho an'ireo vao manomboka amin'ny fidinana an-tendrombohitra. Araka ny angano, eo an-tampon'ny tendrombohitra dia i ogre Ritha Gawr, izay novonoin'ny Mpanjaka Arthur.
Llandudno, ankafizo ny fomba Victoria
Ity dia iray amin'ireo tanàna manintona any North Wales, toerana iray izay toerana fialantsasatra lehibe any Angletera ihany koa. Misy fiara fitaterana lehibe miakatra mankany an-tampon'ny tanàna. Amin'ny maha toerana fizahan-tany antsika dia fantatsika fa hahita serivisy isan-karazany isika, manomboka amin'ny magazay ka hatrany amin'ny trano fisakafoanana, hotely ary kafe. Nalaza noho ny diany tsara tarehy, fa koa ho an'ireo tranobe miendrika Victoria. Ary koa, azo inoana fa teto no nihaonan'i Lewis Carroll Londoner kely iray izay nanentana ny fanahiny hamorona 'Alice in Wonderland'.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Inona no ho hita any Wales, Royaume-Uni
Krimasoandro aloha na aorian'ny fanosorana
Inona ny aretina Houdini?